"25/03/2020 Numero 14 per u - Page 40 of 98 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
N’ỤLỌ NCHE 14
maka ozi ndị ọzọ na
mmelite nleta www.covid19.gov.mt
The Malta Employers ‘Association kwuru na ngwugwu nke ego jikoro n’ihu site ndị ọchịchị bụ
otu nti ego enyem aka na n’ihi nke mkpokọta alo. The Chamber of Commerce ugbu
kwuru na ọ na-afọ na jikoro aka oru kasị kụrụ Covid-19, nke a mgbe na-eto spirit
nke dialgoue na nke ndị ọchịchị wee n’okwu a. The Malta Chamber of SMEs siri ọnwụ na ndị a
jikoro ga-enye a nyeere ka ulo oru na mkpa nke mere na ha nwere ike-echebe ọrụ. The Gozo Business Chamber
na Gozo Tourism Association kwuru na ego ịkpali enye mkpa na ọnọdụ pụrụ iche
emetụta Gozitan ulo oru. The Malta Hotels na Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Association ja Prime Minister raara onwe ya nye
ịhụ na njem bụ na a ọnọdụ iji merie ihe ịma aka jụrụ site Covid-19. The General Ọrụ
Union ugbu kwuru na jikoro hụ a na-ekwe nkwa nke kacha nta ụgwọ maka ndị na-arụ ọrụ na ihe ndị kasị
A AKỤZIRI mmeghachi omume
Ngwugwu ego jikoro
The Bank of Valletta mara ọkwa na-akwado jikoro maka ya ahịa na-emetụta ọnọdụ akụ na ụba
ada banyere site Covid-19. BOV ka ulo oru a moratorium nke dịghị ihe na-erughị ọnwa 3 na isi obodo nakwa dị ka
mmasị nke ga-etinyere ma n’ihi na n’ụlọ mgbazinye ego na onye mgbazinye ego. The anọru akụ na kaadị akwụmụgwọ
enweghị mmezi ebubo e ụba. Ebubo ọhụrụ usoro ihe omume nke n’ụlọ mgbazinye ego na onye mgbazinye ego e
nakwa wepụrụ, dị ka nwere ebubo na ndọtị nke withdrawals na-eji nke n’aka ụlọ ọrụ.
19 ọhụrụ ikpe nke Covid-19 na-enen ke akpatre 24 awa. 8 nke ikpe na-metụtara ije mba ọzọ,
4 onye na-ama ama na kọntaktị na ndị mmadụ n’otu n’otu nje oria na-ama na e kwuru na ọ bụ site na
ahụ ike na, mgbe 7 bu site obodo nnyefe, na isi iyi nke virus ma
chọpụta. Otu n’ime ndị a ọhụrụ ikpe e nwere onye agadi 81 afọ onye mere nnọọ adịghị ka
nwere nsogbu. The ọzọ agadi onye nke afọ 61 bụ ka nọ na Itu ma bụ na a dị oké egwu, ala.
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ mmadụ na-nnọọ na-anwale mma maka virus bụ ugbu a 129.
The ọnụ ọgụgụ nke swab ule nwere accelerated iji mata ndị nwere virus na-anọrọ
ha ozugbo iji belata ya na-agbasa. Dị ka site na ụnyaahụ, na daa ọrịa ime nnyocha na Mater
Dei Hospital malitere na-ewere swabs na anọ dị iche iche oge ohere mpere n’ụbọchị kama atọ, dị ka kwa
gara aga omume. N’ezie, ke akpatre 24 awa, 488 swabs e. Malta foduru n’etiti mba
nke na-ewe ihe kasị swabs, na otú anya 3.819 e weere: ndị a, 2.605 e si ndị mmadụ
eweta mgbaàmà na 1.218 e si ndị kwetara na ụlọ ọgwụ na-eku ume
isi ike. The ọnụ ọgụgụ nke nti mgbe si ule dị otú adabere na onye ọ bụla n’ime anyị. Anyị kwesịrị
na-arụ ọrụ ọnụ iji na-abụghị onyinye mgbasa nke coronavirus.
Swabs na ule
Food na ịṅụ iche nwere nọgidere na-edebe ụkpụrụ amanye ha ka ha na-anọgide
emechi iji maka mgbasa nke Covid-19 na ike belata. Ke akpatre 24 awa, 800 inspections e rụrụ
na Malta na ọzọ 150 na Gozo. Ọ dịghị onye e jidere na-agbasa ndị a ụkpụrụ. The mkpesa foduru
na nke imekọ ihe ọnụ, ma site na ahịa na si n’ihu ọha na bụghị congegrate n’ihu na-ahụ-pụọ
iche, ma na-na-ha anya. I nwere ike na-akọ abuses na 21692447.
Nyocha ON ndị nọ n’okpuru
The Police, ọnụ na Health ọchịchị na ndị ọchịchị si Civil Protection Department,
mụụrụ 329 inspections na Malta na Gozo. N’oge ndị a inspections, otu onye e jidere
iwu e fined. Dị ka mgbe, mkpesa foduru na onye ọ bụla kwesịrị ịbụ na
arụkọ ọrụ na ntụziaka ndị a na-enyere site na ọchịchị.
25981000 – N’ihi na ndị nwere ajụjụ banyere izi ndi oru na
mmetụta nke coronavirus
21692447- N’ihi hoteliers na njem nleta nwere ajụjụ banyere
mara ọkwa jikoro.
25903030 – N’ihi na ndị agadi-enwekwaghị support na-mkpa ọgwụ, njikere mere
nri ma ọ bụ nri na ngwaahịa (mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri).
25469111 – N’ihi na ndị na-arụ ọrụ na-egwu ya edekọ ụlọ ọrụ.
21411 411 – N’ihi na ndị na-amanyere bụ iwu kwarantaini onye na-achọ ihe oriri nke
nri na nkà mmụta ọgwụ
144 – N’ihi na ndị na-achọ ihe ọmụma banyere ego jikoro
ndinọ site Malta Enterprise.
153 – N’ihi na ndị na-achọ ihe ọmụma banyere ego jikoro
ndinọ site Department maka Social Security.
2204 2200 – N’ihi na Maltese bi onye na-ejide na otu nke elu-ize ndụ
mba na chọrọ ịlaghachi Malta
111 – N’ihi na ndị na-enwe mgbanwe nke COVID-19 ma ọ bụ ndị chọrọ ihe ọmụma